बाँकेमा स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ : कुन पालिकामा को बलियो ? – GoodnewsKhabar
बाँकेमा स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ : कुन पालिकामा को बलियो ?
गुडन्यूज खबर । २०७९ बैशाख २७, मंगलवार १८:१५
यसपटक बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहमा कुन दलले चुनावी बाजी मार्ला भनेर अहिल्यै सहजै अनुमान गर्न कठिन छ ।
सत्ताधारी दलले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाट नै नगर प्रमुख नेपाली कांग्रेसलाई र उपप्रमुख जनता समाजवादी पार्टीलाई दिने निर्णय गरेको छ । वडामा मित्रवत् प्रतिष्पर्धा गर्ने गरी भएको यो निर्णय विरुद्ध माओवादी केन्द्रले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर सांकेतिक विरोध जनाइसकेको छ ।
यद्यपि माओवादीका बागीले उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका छन् । खजुरामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच, कोहलपुरमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच चुनावी तालमेल छ । अरु पालिकामा सबै दलको एकल प्रतिष्पर्धा छ ।
पाँच वर्षमा बढेका मतदाता र दलका सदस्य घटबढ भएको हुनसक्छन् । दलका नेता र कार्यकर्ताले दल अदलबदल पनि गरेका छन् । प्रभावशाली उम्मेदवार र न्यूटल मत प्रभावका आधारमा पनि जितहारको निर्धारण हुनसक्छ ।
समाचारमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ र चुनावी तालमेलका आधारमा जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा मुख्य प्रतिष्पर्धाको विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका :
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा राप्रपाका डा.धवल शम्शेर राणा १२ हजार ५ सय १५ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो । राणाले विरासत जोगाउन माओवादी केन्द्रका नगर प्रमुखका आकांक्षी नन्दलाल वैश्यलाई पार्टी प्रवेश गराएर उम्मेदवार बनाउनुभएको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसका डा.सुरेशकुमार कनोडियाले ८ हजार ७ सय ३० मत ल्याएर निकटत् प्रतिद्वन्द्वी बन्नुभएको थियो । कांग्रेसबाट नगर सभापति प्रशान्त विष्ट नगर प्रमुखको उम्मेदवार बन्नुभएको छ ।
विगतमा माओवादी केन्द्रका दामोदर आचार्य ७ हजार १ सय ९८ मत र जसपा (संघीय समाजवादी फोरम नेपाल) का कमरुद्दिन राईले ५ हजार ४ सय ४१ मत ल्याउनुभएको थियो । कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच चुनावी तालमेल छ ।
गठबन्धनका दलको मत तलमाथि नहुने हो भने कांग्रेसका विष्ट प्रमुखमा र जसपाका राई उपप्रमुखमा सहजै जित्नुहुनेछ । नेपालगन्जमा झन्डै ४० प्रतिशत स्थिर मत छ । यो मत राप्रपाका वैश्य र एमालेका मिश्रले पनि प्रभावित गर्नसक्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपालगन्जमा कांग्रेस, एमाले र राप्रपाबीच त्रिपक्षीय प्रतिपस्र्धा छ ।
कोहलपुर नगरपालिका :
कोहलपुर नगरपालिकामा एमालेका लुटबहादुर रावत ९ हजार ७ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो । कांग्रेसका भानुभक्त भट्टराई ९ हजार ८ सय २४ मत ल्याएर ८३ मतले पराजित हुनुभएको थियो ।
तेस्रो स्थानमा माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र न्यौपानेको ६ हजार २ सय २१ मत आएको थियो । एमालेबाट खिलप्रसाद भुुसाल बिरासत जोगाउन लाग्नुभएको छ ।
उहाँलाई एकीकृत समाजवादीले काट्ने मतले प्रभाव पार्न छ । एकल रुपमा लड्दा कांग्रेस नै सबैभन्दा बलियो शक्ति हो । कांग्रेसबाट युवा पुस्ताका पूर्णप्रसाद आचार्यले टिकट पाउनुभएको छ । उहाँको उम्मेदवारीमा असहमति जनाउँदै पाका नेता बलराम शर्माले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको थियो ।
यद्यपी उहाँले उम्मेदवारी फिर्ता भने लिइसक्नुभएको छ । कांग्रेस पृष्ठभूमिका देवानन्द अर्यालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ । उहाँले पनि कांग्रेसकै मत काट्ने देखिन्छ ।
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहको फाइदा माओवादीले लिने संम्भावना देखिन्छ । एमाले विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको छ । माओवादी केन्द्र र समाजवादीबीच तालमेल भएकाले बलियो देखिएका छन् ।
कोहलपुरमा नगर उपप्रमुख कांग्रेसबाट सञ्जुकुमारी चौैधरीले जित्नुभएको थियो । गठबन्धनका आधारमा एकीकृत समाजवादीकी नारायणी वली बलियो देखिनुहुन्छ । कोहलपुरमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेबीच त्रिपक्षीय प्रतिष्पर्धा छ ।
खजुरा गाउँपालिका :
बाँकेमा सबैभन्दा रोचक प्रतिष्पर्धा भने खजुरा गाउँपालिकामा देखिएको छ । यो पालिकामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र ४ वटा वडामा गठबन्धन बनेको छ ।
माओवादी केन्द्रबाट डम्बरबहादुर विक (तुफान) गठबन्धनबाट अध्यक्षका उम्मेदवार बन्नुभएको छ । गठबन्धनबाट उपाध्यक्षमा भने कांग्रेसका मञ्जु मल्ल उम्मेदवार बन्नुभएको छ ।
खजुरामा अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेका किस्मतकुमार कक्षपति ८ हजार ७० मतले अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँको निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका तुफान हुनुभएको थियो । उहाँले ६ हजार ८ सय ९२ मत ल्याउनुभएको थियो ।
तेस्रो स्थानमा कांग्रेसका मो.नकी खाँले ४ हजार ९ सय ५४ मत ल्याउनुभएको थियो । माओवादी र कांग्रेसको मत जोड्दा गठबन्धन बलियो छ ।
एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीबाट सापकोटा उम्मेदवार बन्नुभएको छ । युवा नेता सुमन मल्ल बिरासत जोगाउन साम, दाम, दण्ड, भेद सबै अस्त्र प्रयोग गरिरहनुभएको छ ।
जानकी गाउँपालिका :
जानकी गाउँपालिकामा एमालेका रामनिवास यादव ३ हजार ३ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो । कांग्रेसका छब्बन खाँ ३ हजार ९ मत ल्याएर ८३ मतले निकटत् प्रतिद्वन्द्वी बन्नुभएको थियो ।
तेस्रोमा जसपा २ हजार १ सय ५ र चौथो माओवादी केन्द्रले १ हजार ९ सय ३४ मत ल्याएका थिए । अहिले पनि हिमाशुँ यादव र छब्बन खाँबीच नै मुख्य प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ ।
डुडुवा गाउँपालिका :
डुडुवा गाउँपालिकामा कांग्रेसका नरेन्द्रकुमार चौधरी ४ हजार ६ सय ९१ मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको थियो । राजपाका विजयबहादुर यादव ४ हजार १ सय ९२ मत ल्याएर निकटम् प्रतिद्वन्द्वी बन्नुभएको थियो ।
यादव अघोषित रुपमा एमाले भइसक्नुभएको छ । उहाँले पत्नी सरोजकुमारी यादवलाई एमालेबाट उम्मेदवार बनाउनुभएको छ । विगतमा एमालेबाट शकिल अहमद खाँले १ हजार ४ सय ६६ मत ल्याउनुभएको थियो ।
खाँ अहिले गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभएको छ । यादव कांग्रेस छोडेर जसपामा गएर पनि दोस्रो स्थानमा आउनुभएको थियो । उहाँको व्यक्तिगत प्रभाव छ ।
डुडुवाको वडा नं. ३ का वडाअध्यक्ष भण्डारीलाल यादव जसपाबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभएको छ । डुडुवामा कांग्रेस, एमाले र जसपाबीच त्रिपक्षीय प्रतिष्पर्धा छ ।
नरैनापुर गाउँपालिका :
नरैनापुर गाउँपालिकामा जसपाका इस्तियाक अहमद शाह ४ हजार मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो । कांग्रेसका रामचन्द्र मौर्य चौधरी ३ हजार ३ सय ८ मत ल्याएर निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी बन्नुभएको थियो ।
तेस्रो हुनुभएका एमालेका विक्रम यादवले १ हजार ८ सय ७२ मत ल्याउनुभएको थियो । यादवको सट्टा उहाँका आमा पद्मावति यादवनी उम्मेदवार बन्नुभएको छ । शाह र मौर्य पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ । यहाँ पनि कांग्रेस र जसपाबीच नै मुख्य प्रतिष्पर्धा हुनेछ ।
बैजनाथ गाउँपालिका :
बैजनाथ गाउँपालिकामा एमालेका मानबहादुर रुचाल ठकुरीले ९ हजार ७ सय ७२ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो । दोस्रो स्थानमा कांग्रेसका देवबहादुर खत्रीले ६ हजार ५ सय ७६ मत ल्याउनुभएको थियो ।
तेस्रोमा माओवादी केन्द्रका राजमोहन चौधरीले ५ हजार ३ सय ६३ मत ल्याउनुभएको थियो । एमाले विभाजनको फाइदा यस पटक कांग्रेसले लिने संम्भावना भए पनि गठबन्धनका दीपेन्द्र शाह बलियो उम्मेदवारका रुपमा मानिन थाल्नुभएको छ ।
कांग्रेसका प्रकाशबहादुर शाही पनि प्रतिष्पर्धामा हुनुहुन्छ । माओवादी केन्द्रबाट दीपेन्द्रबहादुर शाह उम्मेदवार बन्नुभएको छ । बैजनाथमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका :
राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा कांग्रेसका लाहुराम थारु ८ हजार २३६ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो ।
दोस्रो स्थानमा एमालेका तुलसीराम थारुले ६ हजार ९०० मत र माओवादी केन्द्रका पट्टु थारुले ६ हजार ६६४ मत ल्याउनुभएको थियो ।
टिकट वितरणमा असन्तुष्टि बढेका कारण कांग्रेसका तप्त पौडेललाई घाटा लाग्ने देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रका पट्टु थारु र एमालेका रामदास चौधरीबीच प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको छ । राप्तीसोनारीमा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
#उम्मेदवारी #टिकट #त्रिपक्षीय #प्रतिस्पर्धा
२०७९ बैशाख २७, मंगलवार १८:१५
नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १ माओवादी केन्द्रका तर्फका अध्यक्षका उम्मेदवार निरक पोखरेलको र्‍यालीमा १५ सय बढी मतदाता स्वतस्फूर्त सडकमा उत्रिएका छन् । वडा भित्रका प्रतिष्ठित उद्धमी, ब्यापारी, बुद्धिजीवी, लगायत सर्वसाधारणको उपस्थिति थियो । सफल उद्धमी टंक धामीका अनुसार यसपटकको निर्वाचन अत्यधिक बहुमतले जितिन्छ । धामीले भन्नुभयो´ हाम्रो माहोल […]
२०७८ आश्विन ३, आईतवार ०७:०५
२०७७ भाद्र १०, बुधबार २२:०६
दैलेखमा थप दुईदिन निषेधाज्ञा